शीर्षकमा बाइबल पदहरू: Самооборона -> थप
Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, - його майно в безпеці.
हेरोदले पत्रुसलाई गिरफ्‍तार गरेर झ्‍यालखानमा हालिदिए, र निस्‍तारचाड़पछि तिनलाई जनताका सामने ल्‍याउने विचार गरेर तिनको पहरा गर्नलाई सिपाहीका चार टोलीको जिम्‍मा लाइदिए।
 तर तिनले आफूलाई धार्मिक देखाउने इच्‍छा गरेर येशूलाई भने, “मेरो छिमेकीचाहिँ को हो त?” येशूले जवाफ दिनुभयो, “एक जना मानिस यरूशलेमबाट यरीहोतिर जाँदैथियो। त्‍यो डाँकूहरूको फेला पर्‍यो। तिनीहरूले त्‍यसलाई नाङ्गै पारेर पिटे, र अधमरो पारी छोड़ेर गए। संयोगले एक जना पूजाहारी त्‍यही बाटो भएर जाँदैथियो, र त्‍यो अधमरो मान्‍छेलाई देखेर त्‍यो अर्कोपट्टि तर्केर गयो। त्‍यसै गरी एक जना लेवी पनि त्‍यस ठाउँमा आएर त्‍यसलाई देखेपछि अर्कोपट्टि तर्केर गयो। तर एक जना सामरी उसको यात्रामा जाँदैगर्दा त्‍यो मान्‍छे भएको ठाउँमा आइपुग्‍यो, र त्‍यसलाई देखेर उसको मन दयाले भरियो। र त्‍यसकहाँ गएर तेल र दाखमद्य लगाएर त्‍यसका घाउहरूमा पट्टी बाँधिदियो, र आफ्‍नै गधामाथि चढ़ाएर त्‍यसलाई एउटा पौवामा ल्‍याई त्‍यसको हेरचाह गर्‍यो। भोलिपल्‍ट उसले चाँदीका दुई सिक्‍का पौवाको मालिकलाई दिएर भन्‍यो, ‘यिनको हेरचाह गर, र अरू बढ़ी खर्च लागे म फर्केर आउँदा तिमीलाई तिरिदिनेछु’।” येशूले सोध्‍नुभयो, “तिम्रो विचारमा यी तीन जनामध्‍ये डाँकूहरूका हातमा पर्ने मानिसको छिमेकी कुनचाहिँ ठहरियो?” तिनले भने, “त्‍यस मानिसमाथि दया देखाउनेचाहिँ।” तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “जाऊ, तिमी पनि त्‍यसै गर।”
१ शमूएल १७:४१-५४
 आफ्‍ना हतियार बोक्‍नेलाई अगि लगाएर त्‍यो पलिश्‍ती दाऊद भएतिर बढ़्यो। त्‍यसले दाऊदलाई नियालेर हेर्‍यो, र राता-राता गाला भएका सुन्‍दर ठिटालाई देखेर तिनलाई घृणा गर्न लाग्‍यो। त्‍यसले दाऊदलाई भन्‍यो, “के म कुकुर हुँ, र लाठाहरू लिएर मसँग लड्‌न आउँछस्‌?” त्‍यसले आफ्‍ना देवताहरूका नाउँमा दाऊदलाई सराप्‍न लाग्‍यो। त्‍यसले भन्‍यो, “आइज, म तेरो मासु आकाशका चराहरू र जमिनका जनावरहरूलाई खान दिनेछु।” दाऊदले जवाफ दिए, “तँ त मसँग लड्‌न तरवार, भाला र बर्छा लिएर आएको छस्, तर म तँसँग लड्‌न तैंले विरोध गरेको इस्राएलका फौजहरूका परमेश्‍वर, सर्वशक्तिमान्‌ परमप्रभुको नाउँमा आएको छु। आजको दिन परमप्रभुले तँलाई मेरो हातमा सुम्‍पिदिनुहुनेछ, र म तँलाई मारेर तेरो टाउको काट्‌नेछु। आज पलिश्‍तीहरूका लाश आकाशका चरा र जमिनका जनावरहरूलाई खुवाउनेछु, र इस्राएलमा एउटा परमेश्‍वर हुनुहुँदोरहेछ भनी सारा संसारले थाहा पाउनेछ। यहाँ भेला भएका सबैले जान्‍नेछन्‌ कि परमप्रभुले न त तरवार न भालाद्वारा बचाउनुहुन्‍छ। किनभने लड़ाइँ परमप्रभुकै हो, र उहाँले तिमीहरू सबैलाई हाम्रा हातमा सुम्‍पिदिनुहुनेछ।” जब त्‍यो पलिश्‍ती तिनी भएतिर बढ्‌न लाग्‍यो तब दाऊदले त्‍यससँग लड्‌नलाई तुरुन्‍तै अगि कुदेर गए। तिनले आफ्‍नो हात झोलामा हालेर एउटा ढुङ्गा निकाले, र घुयेँत्रोमा राखेर त्‍यस पलिश्‍तीको निधारमा हाने। त्‍यो ढुङ्गा निधारैमा गाड़ियो र त्‍यो घोप्‍टो परेर भूइँमा लोट्यो। यसरी दाऊद आफ्‍नो घुयेँत्रो र ढुङ्गाले विजयी भए। आफूसित तरवार नभए तापनि तिनले गोल्‍यतलाई हिर्काएर लड़ाए, र मारे। तिनी कुदेर त्‍यस पलिश्‍ती लड़ेको ठाउँमा गए, र छेउमा खड़ा भए। अनि तिनले त्‍यसैको तरवार म्‍यानबाट थुतेर त्‍यसलाई खतम गरेर त्‍यसको टाउको काटिदिए। जब पलिश्‍तीहरूले आफ्‍नो वीर पुरुष मारिएको देखे, तब उनीहरू फर्केर भागे। इस्राएल र यहूदाका मानिसहरूले तुरुन्‍तै युद्ध-ध्‍वनि उठाए, र गात र एक्रोनका मूल ढोकाहरूसम्‍मै उनीहरूलाई खूब खेदेर लगे। शारैमबाट गात र एक्रोन जाने बाटोमा उनीहरूका लाश जताततै छरिए। पलिश्‍तीहरूलाई खेदेर फर्कंदा इस्राएलीहरूले उनीहरूको छाउनी लुटे। दाऊदले गोल्‍यतको टाउको बोकेर यरूशलेममा ल्‍याए, र त्‍यसका हतियारचाहिँ आफ्‍नै पालमा राखे।
उहाँले भन्‍नुभयो, “तर अब जसको थैलो छ, त्‍यसले त्‍यो बोकोस्, त्‍यसै गरी झोला पनि बोकोस्‌। र जससँग तरवार छैन, त्‍यसले आफ्‍नो वस्‍त्र बेचेर एउटा तरवार किनोस्‌।
 “यदि चोर घर फोर्दैगरेको फेला पर्‍यो भने र त्‍यसलाई पिट्‌दा त्‍यो मर्‍यो भने, त्‍यसको हत्‍याको दोष पिट्‌नेलाई लाग्‍नेछैन। तर घाम झुल्‍किसकेको भए, त्‍यो दोषी हुनेछ। चोरले नोक्‍सानी भरिदिनुपर्छ। तर त्‍यससँग केही छैन भने, चोरीको निम्‍ति त्‍यो बेचिओस्‌।”
तर म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, दुष्‍टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्‌काउला, त्‍यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ।
“यदि चोर घर फोर्दैगरेको फेला पर्‍यो भने र त्‍यसलाई पिट्‌दा त्‍यो मर्‍यो भने, त्‍यसको हत्‍याको दोष पिट्‌नेलाई लाग्‍नेछैन।
दुर्बल र दरिद्रहरूलाई छुटाओ, दुष्‍टहरूका हातबाट तिनीहरूलाई छुटकारा देओ।
प्रिय हो, आफैले कहिल्‍यै बदला नलेओ, तर परमेश्‍वरको क्रोधमा छोडिदेओ। किनभने, लेखिएको छ, “बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ।
 “तिमीहरूले सुनेका छौ, यसो भनिएको थियो, ‘आँखाको बदला आँखा, र दाँतको बदला दाँत।’ तर म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, दुष्‍टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्‌काउला, त्‍यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ।
किनकि तिम्रो भलाइको निम्‍ति तिनी परमेश्‍वरका सेवक हुन्‌। तर यदि तिमी खराबी गर्छौ भने डर मान, किनभने तिनले तरवार व्‍यर्थमा भिर्दैनन्‌। खराब काम गर्नेमाथि परमेश्‍वरको दण्‍ड ल्‍याउने तिनी परमेश्‍वरका सेवक हुन्‌।
 उहाँले भन्‍नुभयो, “तर अब जसको थैलो छ, त्‍यसले त्‍यो बोकोस्, त्‍यसै गरी झोला पनि बोकोस्‌। र जससँग तरवार छैन, त्‍यसले आफ्‍नो वस्‍त्र बेचेर एउटा तरवार किनोस्‌। म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, ‘उहाँ अपराधीहरूसँग गनिनुभयो’ भनी लेखिएको कुरा ममा पूरा हुनैपर्छ। हो, मेरो बारेमा लेखिएको कुरा पूरा भई नै रहेछ।” तब चेलाहरूले भने, “हे प्रभु, हेर्नुहोस्, यहाँ दुई वटा तरवार छन्‌।” उहाँले भन्‍नुभयो, “त्‍यति भए पुग्‍छ।”
दाऊदको भजन  मेरो चट्टान, परमप्रभुको प्रशंसा होस्‌, जसले मेरो हातलाई युद्ध गर्न, र मेरा औँलाहरूलाई लड़ाइँ गर्न सिकाउनुहुन्‍छ।
१ तिमोथी ۵:۸
मार्नलाई लगिएकाहरूलाई बचा, मारकाटतिर ढुनमुनिरहेकाहरूलाई रोक्‌।
 तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो तरवार म्‍यानमा हाल, किनभने तरवार लिने सबै तरवारैले नष्‍ट हुनेछन्‌। तिमी के ठान्‍दछौ, के म आफ्‍ना पितालाई बिन्‍ती गर्न सक्‍दिनँ, र उहाँले तुरुन्‍तै स्‍वर्गदूतहरूका बाह्र पल्‍टनभन्‍दा बढ़ी मेरो निम्‍ति पठाइदिनुहुन्‍न र? तर त्‍यसो भएदेखि यी कुरा यसरी हुनैपर्छ भनी धर्मशास्‍त्रमा लेखिएको कुरा कसरी पूरा हुने?”
तर यो जान, कि घरको मालिकले चोर रातको कुन पहरमा आउँछ भनी जानेको भए, ऊ जागो रहनेथियो, र आफ्‍नो घर फोर्न दिनेथिएन।
 र तिमीहरूको प्राण दिने रगतको सट्टा म निश्‍चय लेखा लिनेछु। हरेक पशुदेखि म प्राणको साटो लिनेछु, र हरेक मानिसदेखि पनि आफ्‍नो दाजुभाइका प्राणको साटो म लिनेछु। जसले मानिसको रक्तपात गर्छ, मानिसबाटै त्‍यसको रक्तपात हुनेछ, किनभने परमेश्‍वरले मानिसलाई आफ्‍नै स्‍वरूपमा बनाउनुभएको हो।
तब उठेर मैले ती सबको निरीक्षण गरें, र भारदारहरू, अधिकृतहरू र सबै मानिसहरूलाई यसो भनें, “उनीहरूसँग नडराओ। महान्‌ र भययोग्‍य परमप्रभुको सम्‍झना गर, र आफ्‍ना दाजुभाइ, छोराछोरी, पत्‍नी र घरहरूका निम्‍ति युद्ध गर।”
 सिमोन पत्रुसले आफूसँग भएको तरवार निकालेर मुख्‍य पूजाहारीको कमारालाई प्रहार गरे र त्‍यसको दाहिने कान च्‍वाट्टै काटिदिए। त्‍यस कमाराको नाउँ माल्‍खस थियो। येशूले पत्रुसलाई भन्‍नुभयो, “तरवार म्‍यानमा हाल। के पिताले मलाई दिनुभएको कचौरा म नपिऊँ?”
 यदि तेरो शत्रु भोकाएको छ भने, त्‍यसलाई खान भोजन दे, यदि त्‍यो तिर्खाएको छ भने, त्‍यसलाई पिउन पानी दे। यसो गर्नाले तैंले त्‍यसको टाउकोमा जलिरहेको भुङ्‌ग्रो खन्‍याउनेछस्, र परमप्रभुले तँलाई इनाम दिनुहुनेछ।
कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर। जुन कुरा सबै मानिसहरूका दृष्‍टिमा आदरणीय छ, तिनमा ध्‍यान देओ।
 येशूको साथमा हुनेहरूमध्‍ये एउटाले हात बढ़ाएर आफ्‍नो तरवार झिक्‍यो, र मुख्‍य पूजाहारीको दासलाई प्रहार गर्‍यो, र त्‍यसको कान छिनाइदियो। तब येशूले तिनलाई भन्‍नुभयो, “तिम्रो तरवार म्‍यानमा हाल, किनभने तरवार लिने सबै तरवारैले नष्‍ट हुनेछन्‌। तिमी के ठान्‍दछौ, के म आफ्‍ना पितालाई बिन्‍ती गर्न सक्‍दिनँ, र उहाँले तुरुन्‍तै स्‍वर्गदूतहरूका बाह्र पल्‍टनभन्‍दा बढ़ी मेरो निम्‍ति पठाइदिनुहुन्‍न र? तर त्‍यसो भएदेखि यी कुरा यसरी हुनैपर्छ भनी धर्मशास्‍त्रमा लेखिएको कुरा कसरी पूरा हुने?”
 “तिमीहरूले सुनेका छौ, यसो भनिएको थियो, ‘आँखाको बदला आँखा, र दाँतको बदला दाँत।’ तर म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, दुष्‍टको मुकाबिला नगर। जसले तिम्रो दाहिने गाला चड्‌काउला, त्‍यसलाई अर्को गाला पनि थापिदेऊ। यदि कोही मानिसले मुद्दा चलाएर तिम्रो दौरा लिने दाबी गर्छ भने, त्‍यसलाई तिम्रो खास्‍टो पनि दिइहाल। यदि कसैले तिमीलाई एक किलोमिटर जान बाध्‍य गर्छ भने, ऊसँग दुई किलोमिटर गइदेऊ। तिमीसँग माग्‍नेलाई देऊ, र तिमीसँग कर्जा लिन चाहनेलाई इन्‍कार नगर। “तिमीहरूले यसो भनेको सुनेका छौ, ‘तिम्रो छिमेकीलाई प्रेम गर, र तिम्रो शत्रुलाई घृणा गर।’ तर म तिमीहरूलाई भन्‍दछु, आफ्‍ना शत्रुहरूलाई प्रेम गर, र तिमीहरूलाई सताउनेहरूका निम्‍ति प्रार्थना गर,
यसैले तिनीहरूलाई भन्, ‘जस्‍तो म जीवित छु, परमप्रभु परमेश्‍वर भन्‍नुहुन्‍छ, दुष्‍टहरूको मृत्‍युमा म खुशी हुन्‍नँ, तर तिनीहरूले आफ्‍नो चाल त्‍यागेर बाँचून्‌ भनी म चाहन्‍छु। आफ्‍नो दुष्‍ट चाल त्‍याग! हे इस्राएलका घराना हो, तिमीहरू किन मर्छौ?’
 हुन सक्‍छ भने, सकेसम्‍म सबैसँग शान्‍तिमा बस। प्रिय हो, आफैले कहिल्‍यै बदला नलेओ, तर परमेश्‍वरको क्रोधमा छोडिदेओ। किनभने, लेखिएको छ, “बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु,” परमप्रभु भन्‍नुहुन्‍छ। बरु, “तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्‍यसलाई खुवाओ, त्‍यो तिर्खाएको छ भने त्‍यसलाई पानी देओ। त्‍यसो गर्नाले तिमीले त्‍यसको टाउकोमा आगोको भुङ्‌ग्रो थुपार्नेछौ।” खराबीबाट पराजित नहोओ, तर खराबीलाई भलाइले जित।
१ शमूएल ๑๗:๓๑-๓๗
 दाऊदले भनेको कुरा अरूहरूका कानमा पुग्‍यो, र त्‍यो कुरा शाऊलकहाँ पुर्‍याइयो, अनि उनले तिनलाई बोलाए। दाऊदले शाऊललाई भने, “त्‍यस पलिश्‍तीको कारण कोही पनि हताश नहोऊन्‌। म गएर त्‍यस पलिश्‍तीसँग लड्‌नेछु।” शाऊलले जवाफ दिए, “तिमी गएर त्‍यस पलिश्‍तीसँग लड्‌न सक्‍नेछैनौ। तिमी त ठिटा मात्र छौ, र त्‍योचाहिँ जीवनभरि नै लड़ाइँ गर्दैआएको छ।” तर दाऊदले शाऊललाई भने, “हजूर, म मेरा पिताका भेड़ाहरूको हेरचाह गर्दैआएको छु। जब सिंह अथवा भालूले आएर बगालबाट भेड़ा बोकेर लैजान्‍थ्‍यो, तब म त्‍यसको पछि गई त्‍यसलाई आक्रमण गरेर त्‍यसको मुखबाट त्‍यस शिकारलाई छुटाउँथे। यदि मलाई आक्रमण गर्नलाई त्‍यो फर्क्‍यो भने म त्‍यसको रौँ समातेर कुटी-कुटी त्‍यसलाई मार्थें। मैले सिंह र भालू दुवैलाई मारेको छु। यस बेखतनाको पलिश्‍तीको दशा तिनीहरूकोभन्‍दा असल हुनेछैन, किनकि त्‍यसले जीवित परमेश्‍वरको सेनालाई विरोध गरेको छ। सिंह र भालूदेखि बचाउनुहुने परमप्रभुले यस पलिश्‍तीको हातदेखि पनि मलाई बचाउनुहुनेछ।” शाऊलले भने, “त्‍यसो भए जाऊ, र परमप्रभु तिमीसँग होऊन्‌।”
 “यदि मानिसहरू आपसमा लड़न्‍त गर्दा कुनै गर्भवती स्‍त्रीलाई चोट लाग्‍यो, र महिना नपुगीकनै त्‍यसले बच्‍चा जन्‍माई तर स्‍त्रीलाई चाहिँ केही नोक्‍सानी भएन भने स्‍त्रीको पतिले भनेबमोजिम र अदालतले तोकेअनुसारको दण्‍ड चोट लगाउने मानिसले देओस्‌। तर स्‍त्रीको केही नोक्‍सानी भयो भने, प्राणको सट्टा प्राण, आँखाको सट्टा आँखा, दाँतको सट्टा दाँत, हातको सट्टा हात, खुट्टाको सट्टा खुट्टा, डामको सट्टा डाम, चोटको सट्टा चोट, कुटाइको सट्टा कुटाइ त्‍यस मानिसलाई मिलोस्‌।”
तर यदि तरवार आइरहेको देखेर पनि त्‍यस पहरादारले मानिसहरूलाई चेताउनी दिनलाई तुरही बजाएन, र तरवार आएर कुनै एक जनाको ज्‍यान लियो भने, त्‍यो मानिसचाहिँ आफ्‍नै पापको कारण लगिनेछ, तर म त्‍यस पहरादारलाई नै त्‍यसका रगतको जवाफदेही तुल्‍याउनेछु’।
तर घाम झुल्‍किसकेको भए, त्‍यो दोषी हुनेछ। चोरले नोक्‍सानी भरिदिनुपर्छ। तर त्‍यससँग केही छैन भने, चोरीको निम्‍ति त्‍यो बेचिओस्‌।”